Heino mhedzisiro yemari yeApple's Q1 2017 | Ndinobva mac
Kunyangwe vakawanda vangatadza kuzvitenda, Apple yakazviita zvakare uye ndeye iyo iyo mhedzisiro yemari kuti vakapa maawa maviri kupera kwaNdira 2017 vanga vabudirira. Uku kwave kuri kuvandudzwa kwemhedzisiro iyo yavakashongedzwa korona se mhedzisiro Q1 mhedzisiro munhoroondo yekambani.
Kubva pane zvishoma zvatakafambira kwauri mundima yapfuura, unogona kufungidzira kuti vagovani veApple nevashambadzi vachafara kwazvo kuziva data ratiri kuzokupa pasi apa.
Apple yakazviita zvakare uye kunyangwe hazvo zvaifungidzirwa zvichiratidza kuti vaizomhan'arira kurasikirwa kune avo vavanogovana navo, vanoshandura huwandu hwacho votaridza huwandu hwakanyanya. Apple yapinda chilling chimiro che $ 78.400 bhiriyoni panguva yemari, kuwana purofiti yakazara ye $ 17.891 mamirioni. Iyi nhamba yakagadzirwa zvakanyanya nekutengesa kweiyo iPhone uye ndeyekuti kana gore rapfuura panguva ino vakatengesa chiyero chaive chakakomberedza mamirioni 75,6 mayuniti, gore rino huwandu uhu hwakwira kusvika pamamirioni 78,3 mamirioni. Anenge mamirioni makumi masere eaya madiki mashura ari kutenderera nyika izvozvi!
Nezvakawanikwa izvi, zvinonziwo zvinodarika mabhiriyoni gumi nemashanu emadhora zvakatodzorerwa kuvashambadziri kuburikidza nekutora zvikamu uye zvikamu.
Tim Cook ataura zvirevo zvishoma zvinoratidza kuti Apple inogutsikana izvozvi.
Isu tinofara kuzivisa kuti yedu yeKisimusi kota mhedzisiro yakatumira yakakwira kwazvo makota kutengesa munhoroondo yaApple, ichityora akawanda marekodhi Takatengesa maPhones akawanda kupfuura nakare kose ndokuisa zvinyorwa zvitsva zve iPhone, Services, Mac, uye Apple Watch kutengesa. Mari inowanikwa kubva kuMasevhisi yakakura zvakanyanya pamusoro pegore rapfuura, inotungamirwa nebasa rekodhi kubva kuApp Store vatengi uye isu tinofara kwazvo nezve zvigadzirwa zvichauya.
69% yekutengesa inotorwa neiyo iPhone, iPad inoramba iri padiki 7% apo Mac iri pa9%. Sezvo isu tichiona, kune Apple makomputa anogadzira akawanda kutengesa, asi mamwe mauri iwe unofanirwa kuisa mari yakawanda muR & D nekuti ivo vanoda kukurudzira kuti vakure.
Kupedza kuongorora nekukurumidza kwemhedzisiro, Tim Cook naLuca Maestri vataurawo nezve:
Iyo MacBook Pro neTouch Bar yakavandudza Mac kutengesa zvakanyanya.
Vagadziri vacho vakakwanisa kuwana muApp Store anenge zviuru makumi matanhatu zvemadhora.
Iyo iPhone 7 Plus yakatengwa zvekuti kusvika masvondo mashoma apfuura ivo vanga vasingakwanise kugadzirisa stock yayo.
Iyo Apple Watch inoramba ichikura nekukurumidza.
MaAirPods ari kubudirira kwete chete mumugwagwa asi muCupertino.
Izvi zvave, muchidimbu, mhedzisiro yeApple yemari yeQ1 2017.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Heano maApple's Q1 2017 emhedzisiro yemari
Mutambo weKushaworld Remastered Unganidzo, uri kutengeswa kwenguva shoma